Duet Ratidziro inokutendera iwe kushandisa iyo Android chishandiso sekondari skrini yePC ▷ Android️ Android Pop ▷ ➡️
Duet Ratidza rinotendera iyo Android chishandiso kuti ishandiswe sechipiri kuratidza kwePC. Yakagadzirwa nechikwata chevaimbove mainjiniya eApple, Duet Ratidza chikumbiro chinokubvumidza iwe kushandisa iyo Android Smartphone kana piritsi, kana iyo Chromebook, sechiratidziro chechipiri chePC uye macOS.
Iko kunyorera kunopa mukana wekuwedzera kugadzirwa ne kushandiswa kwezviratidzwa zviviri zvine kugona kukuru uye isina lag yekuratidzira mhando.
Duet Ratidza maitiro ekushandisa yako yechipiri skrini Android nhare
Icho chishandiso chinokutendera kuti ubatanidze nePC uye macOS nekubata uye nemasaini, kusanganisira maviri-minwe kupururudza, kuvheneka, uye zoom, pamwe iwe unogona wedzera yekubata bha kune chero chinhu Android mudziyo nechero macOS kifaa.
Kuti utange, nyore vhura iyo app pane yako admin chishandiso uyezve yemahara Duet desktop app inozozvionera iyo chishandiso chaunokwanisa kubatana nacho uye chobva chachiita touch screen yakakwirira perfomance.
Duet Ratidza inowanikwa kune Android inowanzo mutengo pa € ​​21,99 nekutenga mukati me-app kutenga, asi parizvino inopihwa pamutengo we € 10,99 kwenguva yakati rebei.
Iyo app inokumbira mvumo yekuwana yako Wi-Fi uye inogona kuwanikwa muGoogle Play Store kuburikidza nebheji. Android 7.0 kana gare gare inodikanwa kuti iiswe.
Anongokuvhunza iwe batanidza piritsi rako kana chishandiso kuPC yako kuburikidza netambo. Panguva ino, shandisa screen screen kuti "zoom in" pahwindo rinoratidzwa pane huru PC skrini. "Yakawedzera skrini".
Semuenzaniso, hwindo rinogona "kudhonzwa" kubva paPC skrini kuenda kune yepiritsi skrini. Uye kamwe pano, pindirana neyekubata zvinodzora. Duet Chiratidziro yakakwana kwazvo kune avo vanoda kuona kana kushanda nezviri mukati panguva imwe chete.
Maitiro ekurekodha mafoni paApple nechishandiso (kusanganisira WhatsApp)
Kuzviparadza-yega kwemeseji muWhatsApp yeApple
Maitiro ekubatanidza iyo PS4 kana Xbox Imwe controller ine smartphone, ndiyo yakanakisa nzira yekutamba pane Android
Maonero ekuona nzvimbo paGoogle mune augmented reality
Maitiro ekudzima kushambadzira kwese paXiaomi nharembozha
Maitiro ekuchinja maapuro ekutanga pane Android
Nharembozha dzeSamsung dzichakwira mudenga senge maPhones matsva
Yakachipa, asi yakanaka: itsva Pixel 6a yakaratidzwa